चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई भेट्न नपाउँदा महरा दु’खी ! – Life Nepali
चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई भेट्न नपाउँदा महरा दु’खी !
काठमाडौं। चिनियाँ राष्ट्रपति सी यतिबेला नेपालमा छन् । उनी दुईदिने राजकिय भ्रमणका लागि नेपाल आएका हुन् । सभामुखको हैसियतमा थुपैपटक सिलाई भेटेका कृष्णबहादुर महरा भने यतिबेला प्रहरी हिरा सतमा छन् । महिला कर्मचारीमाथि यौ न दुव्र्य वहार गरेको आ रोपमा प्रहरीले उनलाई असोज १९ गते सभामुखको सरकारी निवासबाटै प क्राउ गरेको थियो । महरा चीनसँग नजिकका नेता मानिन्छन्।
तर, वि’डम्बना चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको क्रममा उनी प्रहरी हि’रा सतमा छन् । २३ वर्षपछि चीनबाट राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणका लागि आएका हुन् । यस्तो ऐतिहाँसिक समयमा आफुले भेट गर्न नपाउँदा उनी निकै दु खी भएको बताइएको छ । सि को स्वागतमा अहिले पुरै नेपाल लागेको छ । तर, महरा भने महिलामाथिको यौ न दुव्र्य वहारको आ रोपमा प्रहरी हिरा सतमा छन् । सभामुखको हैसियतामा उनले धेरै पटक चीनको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । चिनियाँ राष्ट्रपति सी नेपाल आउँदापनि उनलाई भेट्न नपाउँदा महरा दुःखी रहेको स्रोतको दाबी छ ।
उनी यतिवेला प्रहरी हिरा सतमा पुस्तक अध्ययन गरेर दिन काटिरहेका छन् । उनलाइ भेट्न अहिलेसम्म कोही पनि नेता गएका छैनन् । हुन त उनले पनि कसैलाई भेट्न नचाहेको बुझिएको छ । स्वास्थ्यमा केही स’मस्या आएपछि महरालाई नर्भिक अ’स्पतालमा भ’र्ना गरिएको छ । उनको श्वाँ’सप्र’श्वासँमा स’मस्या आएपछि उनलाई अ’स्पताल भ’र्ना गरिएको हो । अ’स्पतालबाट उनीसँग प्रहरीले पहिलो चरणको बयान समेत लिईसकेको छ ।
Previous देउवा र म ४५ वर्षदेखिका साथी हौँ : प्रधानमन्त्री ओली !
Next जनताले पाँच वर्ष मात्र नभएर पचासौँ वर्षसम्म कम्युनिस्ट नै सरकार हेर्न चाहेका छन् : प्रचण्ड